On juin 11, 2019 10 367
Soratra: Rakotonirainy Andry
Foto-drafitr’asa telo sosona no notokanana tao amin’ny fari-piadidian’ny Zandarimaria-pirenena (CIRGN) Antsiranana ny sabotsy lasa teo.
Nisy ny fitokonana ny trano fonenan’ny zandary, miisa enina ao amin’ny Poste Avancé, Kaominina ambanivohitra Farahalana Sambava. Miandraikitra kaominina, efatra manodidina ity sampan’ny zandraimaria ity: Farahalana , Marojala, Morafeno ary Antsahamaro.
Ankoatra izay, nisy ny fitokanana sy fametrahana ny kaompanian’ny Zandarimariam-pirenana ao Andapa. Ao amin’ny sampan’ny aro lozan’ny fifamoivoizana na ny « Sécurité routière » no nanangana izany. Misy efi-trano, 12 ity kaompania vaovao ity. Anisan’ny tsara indrindra manerana ny nosy ihany koa ary, manaraka ny fenitra maneran-tany.
Taorian’ny lanonana fametrahana ny kaompania ao Andapa, nisy ny fitokanana ny birao sy trano fonenan’ny zandary, ao amin’ny kaomonina Belampona izay ahitana trano miisa 4, samy manana efitrano 4 avy. Hampihena ny tahan’ny tsy fandriampahalemana any Belampona ny fahatongavan’ny zandary satria anisan’ny kaominina, manana lavanilina betsaka anatin’ny distrikan’Andapa.
Ny Jeneraly Njato Andrianjanaka, komandin’ny Zandarimariam-pirenena hatrany no nitokana foto-draitr’asa. Nilaz aity tompon’andraikitry ny fibaikoana ity, fa mitohy ny ezaka ho fanampiana ny zandariamariam-pirenena, amin’ny fanatanterana ny asa sy adidy mavesatra sahaniny.
Nankasitra ny ezaka nataon’ny zandary, ny fokonolona any an-toerana, indrindra anatin’ny vani-potoana hiomanana amin’izao fiotazana lavanila izao.